ကန့်ကွက်တဲ့သူ မရှိဘဲ ပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ အေးသောင်း ( ရုပ်သံ )
July 12, 2019 Thuta Star 0
အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာ အေးဝတ်ရည်သောင်းက နှလုံးသားထဲက ပုဂံအဖွဲ့နဲ့အတူ အဇာဘိုင်ဂျန် ယူနက်စကို အစည်းအဝေးကို တတ်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ နှလုံးသားလို့ ဆိုရလောက်တဲ့ ပုဂံမြေကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး […]
“ဖုတ်” ၀င်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…
အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်တယ် ” မသိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံ ” တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါတယ်။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များမပြောပါ။) ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ […]
၁၅ နှစ် နေခဲ့တဲ့ ကျူးအိမ်လေးဖျက်ခံရရင် နေစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဇော်ကြီးရဲ့ လက်ရှိဘဝ
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ မစို့မပို့ ၀င်ငွေလေးရယူပြီး ဇာတ်ကားတစ်ကား ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ လူကြမ်း အနုပညာရှင်တွေ ရှိကြပါ တယ်။ သူတို့ဟာ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ လူယုတ်မာကြီးတွေ မုဒိမ်းကောင်ကြီးတွေ ၊ ကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း ပြင်ပဘ၀မှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ၀င်ငွေနည်းပါးကြလို့ […]
ဆရာသက္ကမိုးညိုကို AYA ဘဏ် ပြန်တောင်းပန်ပြီ…
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် အလှူခံရန် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်အကောင့်ကို ပိတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆရာသက္ကမိုးညိုကို AYA ဘဏ်က ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို အကောင့်ကို ခေတ္တပိတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် AYA ဘဏ်ကို လူမှုကွန်ယက် သုံးစွဲသူ အများအပြားက ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ AYA ဘဏ်ရဲ့ တောင်းပန်စာ အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ- […]
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား တွေကို ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရောင်ကနေ သိနိုင်တယ်တဲ့….
ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရောင်ကနေ သိနိုင်မယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား မိတ်ကပ် ပြင်ဆင်မှုကနေ လူတွေအကြောင်းကို သိနိုင်ပါတယ် ။ အရောင်တွေမှာလည်း အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ။ လိမ္မော်ရောင် နှုတ်ခမ်းကို လိမ္မော်ရောင် ဆိုးတတ်သူဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ပြီး အားလပ်ချိန်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေ ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ် ။ […]
တသက်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို….
အခု ဖြစ်ပျက် နေသမျှကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အားနည်းမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ စွမ်းဆောင်ရည် မပြည့် ၀မှု၊ ခေတ်ဟောင်းက လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ဖက်တွယ် ထားမှုတွေကို မြင်နေရပါတယ်။ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ မူကြိုကျောင်းဟာ တရားဝင် ဖွင့်ခွင့် လိုင်စင် မကျပဲ ဖွင့်နေခဲ့တယ်။ […]
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်း ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်၊ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးဆိုး၊ ရင်ကြပ်ကြပ် ပဲပင်ပေါက် ရှိရင် လုံးဝကို အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ညအိပ်ယာဝင်၊ မနက်အိပ်ယာထ နှစ်ကြိမ် ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးစိမ်၍ သောက်ပါ။ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်၊ အဆင် […]
ချစ်သူသက်တမ်းလေးနှစ်မှာ သိန်းသုံးဆယ်စုမိခဲ့သော ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဏ်စာအုပ်လေး
ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ် အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ […]
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီအချက်(၆)ချက်ကို လုပ်ပေးပါ…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲတတ်တဲ့၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယောကျာ်းလေးတွေက သဘောကျပေမယ့် လွယ်လွယ်နဲ့မချဉ်းကပ်ရဲပါဘူး။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်တယ် ၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို သဘောကျနေရင် ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ (၁) စိန်ခေါ်မှုတွေဖန်တီးတတ်ရမယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ငြီးငွေ့စရာအချစ်ရေးကို လိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ […]
မူကြို သက်ငယ်မုဒိန်းမှ ဆရာမသားကို ဖမ်းလိုက်ပါပြီ…
ခ​လေးမငယ်လေး တယောက် နေ့က ​လေးထိန်းကျောင်းမှာ မုဒိမ်း အကျင့်ခံရတယ် …။ ကျင့်တဲ့ မုဒိမ်းသမားက ခ ​လေး ဆရာမရဲ့ သား ။ အရွယ်က ၁၂ နှစ်သား ကောင်လေး ပါ …။ ရဲက ဖမ်းစစ် အကုန်ပေါ် ၊ ကောင်လေးက […]